छ लाख भन्दा बढी नेपाल फर्कर्ने – bampijhyala.com
Home > समाचार > Covid -19 > छ लाख भन्दा बढी नेपाल फर्कर्ने
छ लाख भन्दा बढी नेपाल फर्कर्ने
२४ भाद्र २०७७, बुधबार १३:४१ bampijhyala
२४ भदौ, बाँपीझ्याला, काठमाडौँ । कोभिड–१९ का कारण एक वर्षमा छ लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किने एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसरी फर्कनेमा विभिन्न देशबाट रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय गुमाउने रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको हो ।
कोभिड–१९ ले श्रम बजार स्वदेश तथा विदेशमा पार्ने असर विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनमा पाइएको जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा समेटिएको त्यो सङ्ख्या कोभिड–१९ का कारण छ महिनादेखि रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय बन्द भएर समस्यामा परेकाको रहेको उल्लेख छ । भारतबाहेक विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीमा ३२ लाख आठ हजार भन्दा बढी नेपाली रहेको पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यदलका संयोजक डा. फुयालले त्यसरी फर्किने मध्ये ४० प्रतिशतलाई रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था हुने भएकाले त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर कार्ययोजना अघि सारेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विदेशबाट आएका सबैले रोजगारी नै चाहेका हुन्छन् भन्ने हुँदैन ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा सरकारले थप ३० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको डा. फुयालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सिर्जना गरिएका थप ३० प्रतिशत रोजगारीमा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर रित्तै फर्किएका ४० प्रतिशत, स्वदेशमा रोजगारी गुमाएर बेरोजगार बनेका ४० प्रतिशत र नयाँ २० प्रतिशतलाई प्राथमिकताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराइने योजना सरकारको रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
(सीसीएमसी) ले विदेशी तथा स्वदेशी रोजगारीमा परेका असर, बेरोजगारीको अवस्था र सम्भावित रोजगारीका अवसरका विषयमा अध्ययन गर्न योजना आयोगका सदस्य फुयालको नेतृत्वमा गत वैशाखमा गठन गरिएको हो ।
कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका एक÷एक जना सहसचिवको सहभागिता रहेको खबर आजको गोरखापत्रले जनाएको छ ।
आज – २४ भाद्र २०७७ बुधवार को राशिफल
सञ्चार गृह २४ भाद्र २०७७, बुधबार १३:४१
स्थानीय तहको अन्तिम बजेट आज आउँदै २४ भाद्र २०७७, बुधबार १३:४१
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने २४ भाद्र २०७७, बुधबार १३:४१
हजुरको आजको दिन, आज – १० आषाढ २०७८ बिहिवार को राशिफल २४ भाद्र २०७७, बुधबार १३:४१
फेरी बढ्यो पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य २४ भाद्र २०७७, बुधबार १३:४१